Polyphenylene Ether, Hydrazine Hydrate, Pesticide Pakati - Juxing
Pesticide iri pakati
Mishonga iri pakati
Hebei Juxing international trade co., Ltd., Yakasimbiswa muna august 2019, iri muJize functionnal nzvimbo ye qingdao freetrade port, iri padhuze ne hanhuang njanji uye 311.318 nzira yematunhu, traffic iri conwenient, nzvimbo mukana uri pachena.
Isu tine yepasirose yepamberi gungano mutsara uye yekugadzira tekinoroji, yakasimba yemhando yekudzora manejimendi sisitimu.
AD-67 Mushonga, CAS: 71526-07-3
Hebei Juxing nyika dzekutengeserana co., Ltd., Yakavambwa muna Nyamavhuvhu 2019, iri munzvimbo yejize functionnal nzvimbo yeqingdao freetrade port, iri padhuze ne hanhuang njanji uye 311.318province mugwagwa, traffic iri yakawanda kwazvo, nzvimbo mukana uri pachena .. .
1.Bwe vane chikero chakakura 5000 + m2 yekugadzira base.
2. Yakazara mhando yekuongorora system.
3. Rutsigiro R & D timu rutsigiro.
4. Boka rekutengesa rakakodzera, 24/7 sevhisi.
Tine hukuru-hwekugadzira hwaro hwe5000 + m2. Zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa pasi rese. Welcome kuti pamwe nesu.
Iine yepasi rese gungano mutsara uye yekugadzira tekinoroji, yakaoma solid control manejimendi system
Tine nyanzvi R & D timu uye chakanakisa timu yekutengesa, zuva rese kukupa iwe yekumirira sevhisi.
Inowanikwa muQingdao, padhuze nenjanji uye nzira huru yematunhu, zvifambiso zviri nyore, zviripachena nzvimbo nzvimbo.
Chiedza chekuvhenekesa Muiyo fotifotable sisitimu, kusanganisira UV simbi, kuputira UV, inki yeUV, nezvimwewo, shanduko yemakemikari inoitika mushure mekugamuchira kana kutora simba rekunze, uye kuora kuita mahara radicals kana cations, zvichikonzera iyo polymerization reaction. Photoinitiators zvinhu zvinogona kuburitsa f ...
Mishonga inopindirana Mune ma1990 s, kugadzirwa kwepamba kweammonia thiamethoxam oxime acid yeanopfuura makumi maviri emakambani makwikwi emusika ari kuramba achiwedzera makwikwi pakati pemabhizinesi anokonzerwa nehunyanzvi hunyanzvi kutanga kudonha mutengo kusvika parizvino epamba ammonia thiamethoxam ...
Pesticide iri pakati Pesticide inzira yakakosha yekugadzira mukugadzirwa kwekurima, iyo inoita basa rakakosha mukudzora zvirwere, tupukanana nemasora, kudzikamisa nekuvandudza goho rezvirimwa. Kunyangwe ichikanganiswa nemutengo wezvigadzirwa zvekurima, nzvimbo yekudyara, mamiriro ekunze, ...
Laboratories anoshandiswa pakutsvagisa sainzi anotora mafomu mazhinji nekuda kwekusiyana Isu tinopa yakakwana maitiro ekupomba kugona.
Hebei Jvxing International Kutengesa Co., Ltd.